Flexible LED ကို Track အလငျး၌ Plug - LED ကို Down Light က, LED ပြောက်အလင်း,,LED ကို Track အလင်း,LED ကိုရေလွှမ်းမိုးအလင်း,LED ကို Linear အလင်း,LED လမ်းအလင်းစက်ရုံထုတ်လုပ်သူ
2 ဝါယာကြိုးနဲ့ LED Track အလင်း
3 ဝါယာကြိုးနဲ့ LED Track အလင်း
4 ဝါယာကြိုးနဲ့ LED Track အလင်း
LED ကို Downlight
SMD LED ကို Downlight
COB LED ကို Downlight
ဆွဲပြားကို LED မြှောင်အလင်း
စီးပွားရေးကျဆင်းမှုနဲ့ LED မြှောင်အလင်း
တောင်ပေါ်က LED ကို Panel ကိုအလင်း Surface
စီးပွားရေးကျဆင်းမှုနဲ့ LED Panel ကိုအလင်း
နေအိမ် » ကုန်ပစ္စည်း » Flexible LED ကို Track အလငျး၌ Plug
LED ကိုအမှတ်တရမီးအိမ် Up ကို
LED Spotlight ကို
LED သံလိုက် Lamps
မော်ဒန်ဒီဇိုင်း SMD Surface က Downlight
LED Adjustments Downlight စီးပွားရေးကျဆင်းမှု Square ကို Down Light က
ဗိသုကာကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Led 9W 10W စီးပွားရေးကျဆင်းမှု COB Adjustments Gimbal Downlight က Black
မျက်နှာပြင်က Round နဲ့ LED Downlight တပ်ဆင်ထား
တရုတ်ကို LED COB Downlight အိမ်ရာ
High Quality ရင်ပြင် COB LED ကို Downlight
ရင်ပြင်နဲ့ LED Surface ကတောင်ပေါ်ကမျက်နှာကျက်အလင်း
ချိန်ညှိတဲ့ Surface ရင်ပြင်နဲ့ LED Downlight တပ်ဆင်ထား
Flexible LED ကို Track အလငျး၌ Plug
ပစ္စည်းအမျိုးအစား Track Lights
LED အလင်းအရင်းအမြစ် COB/SMD
input ဗို့အား(V ကို) AC85-265
ဆီမီးခွက်အလင်းအား flux(LM) 3150
ဆီမီးခွက်အလင်းအားစွမ်းရည်(LM / w) 90
CRI (ထွက်>) 80
အိုင်ပီခဲ့သည် Rating IP20
လက်မှတ်ပေးခြင်း CCC, EC, RoHS
မူလအစရာ ဂွမ်ဒေါင်း, တရုတ်နိုင်ငံ (ပြည်မကြီး)
ထုတ်ကုန်အမည် Flexible LED ကို Track အလငျး၌ Plug
We are manufacturer with more than 10 နှစ်အတွေ့အကြုံ, factory is located in Foshan. All our engineers and workers are professional experienced in making LED track light. OEM and ODM are welcome. If you need to make your design come true, we have the most professional team help you when you could provide us the 3D/CAD drawings.
တစ်ဦးက: 1/1 replacement of defects within the warranty period. Flexible solutions are available depending on customer’s needs.
တစ်ဦးက: We accept online payment,L/C, D/A, D/P, T / T, Western Union, MoneyGram, PayPal.
တစ်ဦးက: Most are2နှစ်အာမခံ, some will be 3-5 နှစ်အာမခံ.
LED ကို Track အလင်း,2ဝါယာကြိုးနဲ့ LED Track အလင်း,3ဝါယာကြိုးနဲ့ LED Track အလင်း,4ဝါယာကြိုးနဲ့ LED Track အလင်း
ဟိုတယ်အရောင်းဆိုင်များရထားနဲ့ LED Track အလင်းများ
စင်္ကြံသည်ခေတ်သစ် 5000K Track Lighting
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် Matte က Black LED ကို Track အလင်းများ
ဧည့်ခန်းများအတွက် track Lighting ကရိယာ
led hard light bar ၏ထူးခြားချက်များနှင့်အားသာချက်များ
Adress: Xiya စက်မှုဇုန်, Songgang မြို့, Nanhai Dist, Foshan စီးတီး, ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်, တရုတ်နိုင်ငံ
မူပိုင် © Foshan VOClighting Co. ,,.Ltd မှ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.